Milton Glaser, mpamorona endrika kanto, dia nody mandry tamin'ny faha-91 taonany Famoronana an-tserasera
El mpamorona sary malaza dia nodimandry tamin'ny faha-91 taonany. Ilay mpamorona angano sy mpamorona ny sary famantarana New York dia nandao antsika ny zoma lasa teo tamin'ny andro nahaterahany.
Iray amin'ireo mpamorona malaza indrindra any Amerika ary fanta-daza izy ho an'ity foko am-po ity miaraka amin'ny "I love NY". Natao tamin'ny 1977 miaraka amin'ny hevitra hampiroborobo an'i New York, io dia nanjary teny fiambenana ho an'ny renivohitra New York.
Iray amin'ireo sanganasa malaza indrindra amin'ity mpamorona no afisy nataony ho an'i Bob Dylan tamin'ny 1967 ary ahitanao ny silhouette an'ilay mpitendry mozika fanta-daza miaraka amina andiana fiovana isan-karazany amin'ny lokon'ny volony.
Glaser koa no Talen'ny famolavolana ny New York Magazine ary niara-nanorina izy tamin'ny 1968. Ary mazava ho azy, tamin'ny faran'ny herinandro lasa teo dia nisy mpanakanto maro izay namela ny fanomezam-boninahitra an'ilay mpamorona mpamorona manan-talenta avy amin'ny kaonty Twitter-dry zareo ary eto dia mirakitra ny sasany amin'izy ireo izahay.
Ity ny fanomezam-boninahitra kely ho an'i Milton Glaser izay namorona indrindra ny sary famantarana "Tiako i New York" izay fantatra ankehitriny toy ny tamin'ny namoronana azy tamin'ny 1977. #miltonglaser #valemiltonglaser #famolavolana Sary #mpanao sary #design #art pic.twitter.com/Irq80dGVjJ
- Adrian Elton (@TheSurrealMcCoy) Jona 29, 2020
Ity fo maneho ny asany ity dia toa vaky tamin'ny sasany tamin'ny fanomezam-boninahitra ho an'ny mpamorona iray izay namela santionany amin'ny fahalalany tao amin'ny kilasiny. Araka ny nasehon'ny iray tamin'ireo mpianany: «tamin'ny iray tamin'ireo kilasiny dia nilaza izany tamintsika izy azonao atao ny milaza raha tsara na ratsy ny mpanjifa tamin'ny zavatra tsapanao tamin'ny faran'ny andro, nahatsapa ho be hery ve ianao sa tsy nisy izany? »
Milton Glaser, sary namboarina ho an'ny I (fo) New York logo, 1976 https://t.co/PEuroe6fqL pic.twitter.com/ONLcKOLIFP
- Michael Bierut (@michaelbierut) Jona 27, 2020
Miala koa izahay fahatsiarovana ilay kisarisary izay naneho ny Tiako NY ary izany dia milaza mazava fa ny hevitra dia manandanja kokoa noho ny vita. Ny hevitra iray dia afaka mamindra ny tendrombohitra toa ilay tany New York noho io fo io sy ilay "tiako ianao" an'i Milton Glaser ary avy eto dia manome ny fanomezam-boninahitra manokana ihany koa izahay amin'ny fanomezam-boninahitra ny fahatsiarovana azy ary manana izy namakivaky ny tranokalanay tamin'ny fotoana samihafa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Milton Glaser dia nandao antsika tamin'ny faha-91 taonany
Mampiroborobo ny volanao amin'ny fanarahana ireo dingana tsotra ireo